တင်အဆီကျ လေ့ကျင့်ခန်း Hip Exercise ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
တင်အဆီကျ လေ့ကျင့်ခန်း Hip Exercise
Saturday, December 15, 2012 Taunzalat
တင်မှ အဆီများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး တင်ကို လှပအောင် ပုံသွင်းပေးသွားနိုင်တဲ့ နေ့စဉ်ပြုလုပ်နိုင်သော တင်လေ့ကျင့်ခန်း (၄) မျိုးကို ရှာဖွေတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ (ဒီတစ်ခေါက် ပုံရှာရအလွန် ခက်ခဲတာကြောင့် ပုံညီညွှတ်မှုမရှိခြင်းအတွက် သည်းခံပြီးဖတ်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။)
၁. Side Lunge Slide
၂. Front one legged squat
၃. Chair squat
ဒီလေ့ကျင့်ခန်း က တင် အလယ်ပိုင်း ကြွက်သား ကို ပုံသွင်းတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်။
၁)ခြေဖ၀ါးနှစ်ဖက်ကို ကိုယ့်တင်အကွာအဝေးအတိုင်း ခြားရပ်ပါ။ လက်ကို ခါးပေါ်တင်ထားပါ။
၂)ထို့နောက် ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း ခြေတစ်ဖက်ကို ဒူးကွေးပြီး ခြေတစ်ဖက်ကို ဘေးဖက်သို့ လျှောထုတ်ပါ။
၃)ထိုအနေအထားကို ခဏကြာထိန်းထားပြီးလျှင် နဂိုအနေအထား ပြန်ရပ်ပါ။
ထိုကဲ့ သို့ အခြားခြေတစ်ဖက် ကို ပြောင်းလုပ်ပါ။ အနည်းဆုံး (၈) ခါ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
၁)ခြေဖ၀ါးနှစ်ဖက်ကို ကိုယ့်တင်အကွာအဝေးအတိုင်း ခြားရပ်ပါ။ လက်ကို ရှေ့သို့ တန်းပါ။
၂)ဘယ်ခြေ ကို အရှေ့သို့ ပထမပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း မတင်ပါ။
၃)ထို့နောက် ဒုတိယပုံ တတိယပုံတို့ ကဲ့သို့ ဘယ်ခြေဖနောင့် ကြမ်းပြင် ထိသည်အထိ ထောက်ထားသော ညာခြေကို ကွေးချပါ။
၄)ပြီးလျှင် ဖြည်းဖြည်းချင်း မတ်တပ်အနေအထားသို့ ပြန်ထပါ။
ထိုကဲ့သို့ ညာခြေကို ပြောင်းလုပ်ပါ။ အနည်းဆုံး (၄)ခါ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
၁)ထိုင်ခုံ အရှေ့မှာ ခြေဖ၀ါးနှစ်ဖက်ကို ကိုယ့်တင်အကွာအဝေးအတိုင်း ခြားရပ်ပါ။ လက်ကို ရှေ့သို့ တန်းပါ။
၂)ဒူးကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ထိုင်ခုံနှင့် တင် ထိခါနီးထိ ကွေးပါ။ ဆန့်ထားသော လက်မှ ကိုယ်ကိုမလဲသွားအောင် ထိန်းသွားပါလိမ့်မယ်။
၃)ထို နေအထားတိုင်း ၃ စက္ကန့် နေပြီး ဖြည်းဖြည်း ချင်းပြန်ထပါ။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို တော့ ၁၄ ခါအနည်းဆုံးပြုလုပ်ရမှာပါ။
ဖားထိုင် လေ့ကျင့်ခန်းလို့ လူသိများပါတယ်။
၁) ခြေဖ၀ါးနှစ်ဖက်ကို ကိုယ့်တင်အကွာအဝေးအတိုင်း ခြားရပ်ပါ။
၂)တင်ကို ပထမပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း ထိုင်နိုင်သလောက် ကြမ်းပြင်နှင့်အနီးဆုံးဖြစ်သည် ထိ ၃ စက္ကန့်မျှထိုင်ပါ။
၃)ထို့နောက် ကိုယ်ကို ဒုတိယပုံအတိုင်း ပြန်ဆန့်ထုတ်ပါ။
ထိုကဲ့သို့ အနည်းဆုံး (၈) ခါ ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပို့စ်ကို ရေးဖို့ တောင်းဆိုတဲ့ မီးမီးနဲ့ သူလေး ကို လည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးရင်လည်း တိုင်းတာမှု အလေ့အကျင့်လေးထားပြီး တစ်ပတ်တစ်ခါ တိုးတက်မှုကို တိုင်းယူကြည့်ကြပါ နော်။